‘ढुक्क भएर शेयर भर्नुस्, उचित प्रतिफल दिन्छौँ’
नेपाल लाइभ सोमबार, असार १५, २०७७, १३:३०
गोरखामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असार २१ गते सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्दैछ। संस्थाले यसअघि नै आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरिसकेको छ। हाल लघुवित्तले २२ जिल्लामा ६० वटा शाखा कार्यालयमार्फत् लघुवित्त सेवा दिँदै आएको छ।
संस्थाको प्राथमिक शेयर निस्कासन (आइपिओ) अघि नेपाल लाइभले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्दै हुनुहुन्छ, साधना लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ?
साधना लघुवित्तको आव्हानपत्रमा प्रकाशित वित्तीय विवरणले संस्थाको यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउँछ। लघुवित्तले स्थापनाको वर्षदेखि नै नाफा हासिल गरेको छ। वित्तीय विवरणसँगै यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि जोडिएर आउँछ। जसमा हिजो विकास बैंकको सुरुवात गरी सफल बनाएका, बैंकिङ विशेषज्ञको रूपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्य गरेका व्यक्तिहरुको टिम सञ्चालक समितिमा छ।
व्यवस्थापन तहमा भन्नुपर्दा करिब २ दशकदेखि म यही क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छु। व्यवस्थापनका अन्य साथीहरुमा समेत यो क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ। त्यसैगरी संस्थापक शेयरधनीका रूपमा २ वटा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुको लगानी रहेको छ।
कोराना भाइरसको महामारीले साधना लघुवित्तलाई पनि असर गर्‍यो होला, यो वर्ष संस्थाकाे पर्फर्मेन्स कस्तो आँकलन गर्नुभएको छ?
कोरोना भाइरसको महामारीले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै वित्तीय संस्थालाई र अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै साधना लघुवित्तलाई समेत असर गरेको छ। वर्तमान अवस्थाको कारण संस्थाले विगतमा जुन गतिमा आफ्नो पर्फर्मेन्स हासिल गर्दै आएको थियो, त्यसमा केही संकुचन आएको छ। तर पनि हामीले सुरुवातदेखि नै संस्थाको आधार बनाइसकेको हुँदा हामी वार्षिक लक्ष्यको नजिक छौं। हाम्रा वित्तीय सूचकहरु गत वर्षको तुलनामा बढेका छन्। यसलाई आधार मान्दा हाम्रो मुनाफाको दर समयसापेक्ष राम्रै हुने आँकलन गरिएको छ।
अहिले आइपिओ भर्नेले साधना लघुवित्तबाट प्रतिफल कहिलेदेखि पाउँछन्?
शेयरधनीहरुले यो आर्थिक वर्षको कमाईबाटै अझ गत वर्षहरुको संचित आम्दानीसमेत गरी अर्को वर्ष प्रतिफल पाउनुहुन्छ। अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यसपालीको शेयरधनीहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ। जबकि लगानी गरेको १० दिनमै प्रतिफल पाउनुहुन्छ।
आइपिओपश्चात् साधना लघुवित्तको योजना के छ?
अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्रको अनुभवलाई प्रयोग गरेर एउटा नमुना लघुवित्तको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने नै सञ्चालक समिति, शेयरधनीहरू लगायत वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन सबैको मुख्य योजना हो। हामी त्यस दिशामा उन्मुख हुनेछौं। यसका लागि आइपिओपश्चात् साधना लघुवित्तको पुँजीको आधारका साथसाथै संस्थाको सञ्जाल समेत ठूलो हुनेछ।
वित्तीय संस्थाले गत माघबाट मात्रै राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति भएको र हाल २२ जिल्लामा मात्र आफ्नो शाखा सञ्जाल कायम गरेको हुँदा आगामी आइपिओमार्फत् देशैभरका लगानीकर्ताहरु संस्थामा आबद्ध हुनुहुनेछ। त्यसपश्चात् आगामी दिनहरूमा यस संस्थाको प्रगतिका लागि अझ बढी स्नेह तथा सदभाव संस्थाले पाउनेछ। जसको फलस्वरूप आवश्यकताअनुसार देशैभरमा शाखा सञ्जाल स्थापना गरी राज्यले लिएको गरिबी निवारणको नीतिलाई लघुवित्त कार्यक्रममार्फत् सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतासँगै योजना रहेको छ।
पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन्, साधना लघुवित्त मर्जरमा जाने सम्बन्धमा कस्तो धारणा रहेको छ ?
पछिल्लो समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको विचलन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तीव्र दोहोरोपना एवं कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको परिणात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक वृद्धिको पाटोलाई मजबुत बनाउन, निरीक्षणमा सहज बनाउन, वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थायित्व दिनका साथै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र सक्षम पार्न मर्जर/प्राप्तिको नीति ल्याइएको हुनसक्छ।
मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र बैंकको यो रणनीति वर्तमान आवश्यकतालाई हेर्दा यो स्वागतयोग्य पनि छ। जसको फलस्वरूप केही लघुवित्त संस्थाहरु स्वस्फूर्तरूपमा मर्जरमा गएका र केही मर्जरका लागि चरणबद्ध छलफलमा रहेका छन्। जहाँसम्म साधना लघुवित्तको मर्जरसम्बन्धी धारणा भन्नुपर्दा साधना लघुवित्तले नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलोपटक आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरेको छ र यो लघुवित्त क्षेत्रको एउटा उदाहरणीय काम पनि हो।
साथै प्राप्तिपश्चात् विगतका दुई वित्तीय संस्थाहरु एक भएपश्चात कार्यसञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको बरु संस्थाको पुँजीका साथै संस्थाका प्रवर्द्धकहरू समेत थप हुन गई वित्तीय संस्थालाई थप मार्गदर्शन र सहयोग पुग्ने महसुस भएको हुँदा आगामी दिनमा समेत मर्जरलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नका लागि गत साधारणसभाले मर्जर सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ।
अन्त्यमा, साधना लघुवित्तको आइपिओ किन भर्ने, सर्वसाधारणलाई के भन्नुहुन्छ?
प्रथमत: लघुवित्तको आइपिओ किन भर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तुलनात्मक रूपमा अन्य कम्पनीको भन्दा लघुवित्त कम्पनीको प्रतिफल बढी हुने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्नुभएको छ। जसले गर्दा विगतका लघुवित्त कम्पनीको आइपिओमा धेरै गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ।
जहाँसम्म साधना लघुवित्तको आइपिओको कुरा छ साधनाको विगत ३ वर्षको वित्तीय विवरण हेर्नुस्, त्यहाँ सुरुवातकै वर्षदेखि सञ्चित मुनाफा पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी विगतदेखि हालको कठिन समयसम्मको व्यवसाय वृद्धिको सूचकहरुलाई हेर्नुस्, पक्कै पनि सन्तुष्ट हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। तसर्थ, संक्षेपमा भन्नुपर्दा ढुक्क भएर शेयर भर्नोस्, स्थापनाको वर्षदेखि नै नाफा कमाएको यस साधना लघुवित्तले उचित प्रतिफल दिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आइपिओ बाँडफाँट भएपश्चात् यस वर्ष नै प्रतिफल दिइने हुँदा यहाँहरूले गर्नुभएको लगानीको १० दिनमै उचित प्रतिफल पाइन्छ, ढुक्क भएर शेयर भर्नोस्।
काेराेना राेकथाम र उपचारका लागि कर्णाली प्रदेशले छुट्यायाे झन्डै १४ कराेड नेपाल लाइभ
चाैधरी फाउन्डेसनको आईसीयु र अक्सिजन प्लान्ट बनाउन १० कराेड सहयाेग नेपाल लाइभ
संसद्‍ बन्द गरेर बजेट कानुन मिच्दै सरकार : न प्रि-बजेट छलफल, न बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता नेपाल लाइभ
पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो नेपाल लाइभ
एनएमबि बैंकको साढे ८ प्रतिशतको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला आइतबार, जेठ २, २०७८
क्षेत्रपाटी नि:शुल्क क्लिनिकलाई जोय फाउन्डेसनको सहयोग आइतबार, जेठ २, २०७८
टेलिकमकाे फोरजीमा अब एचडी भ्वाइससँगै भिडियाे कल सेवा आइतबार, जेठ २, २०७८